संसारलाई नै अचम्मीत पार्न सफल नेपाली चेली जस्ले लेखेर राम्रो अक्षर बनाएर भाग्य चम्काईनन हेर्नुहोस छिमेरी देश भारतमा पनि तहल्का मच्चियो - Sudur Khabar
संसारलाई नै अचम्मीत पार्न सफल नेपाली चेली जस्ले लेखेर राम्रो अक्षर बनाएर भाग्य चम्काईनन हेर्नुहोस छिमेरी देश भारतमा पनि तहल्का मच्चियो
काठमाडौं, भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा पढ्ने प्रकृति मल्ल कम्प्युटरमा टाइप गरेको भन्दा पनि राम्रो अक्षर लेख्छिन् । उनले लेखेको अक्षर हेर्ने सबैले भन्छन् – ‘वाह, कस्तो जादू, कसरी लेख्न सकेको होला यसरी !’ हुन पनि उनले लेखेको अक्षर टाइप गरेको भन्दा कमको देखिँदैन । केरमेट नगरीकन सररर मिलाएर लेख्न सक्ने उनको कला देखेर विद्यालयका शिक्षक र साथीहरु पनि अचम्म मान्छन् । ‘उनी सानैदेखि राम्रो लेख्छिन्, उनको अक्षर देख्दा हामी पनि चकित पर्छौं’ विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख जितबहादुर कुँवरले भन्नुभयो ।
सबैलाई चकित बनाएर अक्षर कोर्न सक्ने प्रकृतिको घर धनकुटा हो । अहिले उनी भक्तपुरमै बस्छिन् र सैनिक आवासीय विद्यालयमा पढ्छिन् । काठमाडौं उपत्यकाका विद्यार्थीहरुबिच आयोजना गरिएको हस्तलेखन प्रतियोगितामा उनी पनि सहभागी भएकी छिन् । प्रतियोगितामा उपत्यकाका ४ हजार विद्यार्थीले भाग लिएका छन् । सबैलाई उछिनेर प्रथम हुने प्रकृतिको लक्ष्य छ । नतिजा आउँदो ३० गते सार्वजनिक हुनेछ ।
त्यसो त विद्यालयका अरु विद्यार्थीको हस्तलेखन पनि राम्रो रहेको कुँवरले दाबी गर्नुभयो । ‘अक्षर राम्रो लेख्नको लागि हामीले स्कुलमा तालिम नै दिने गरेका छौं’ कुँवरले भन्नुभयो, ‘लेखन सुधार्न कक्षा ६ देखि तालिम दिने व्यवस्था गरेका छौं, सबैको अक्षर सुध्रिएको छ, त्यसमा पनि प्रकृतिको त धेरै राम्रो छ ।’ यसअघि पनि आफ्नो विद्यालयका एक विद्यार्थी लेखन प्रतियोगितामा दोस्रो भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थीलाई हौसला दिन प्रतियोगिता
परीक्षामा ठीक उत्तर लेखेर मात्र हुँदैन, अक्षर पनि उस्तै सफा र शुद्ध हुनुपर्छ । अक्षर राम्रो छ भने त्यसले कापी जाँच्नेलाई पनि आकर्षित बनाउँछ । त्यसो त हरेक विद्यालयले आफ्ना सबै विद्यार्थीको अक्षर शुद्ध र सफा होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएकै हुन्छन् ।
तर सबै विद्यार्थीले राम्रो लेख्न सक्दैनन् । राम्रो अक्षर लेख्न सक्नु पनि एउटा कला हो । विद्यार्थीलाई राम्रो लेख्नको लागि हौसला दिन एडुटेक एकेडेमी सोलुसन भन्ने संस्थाले बेलाबेला यस्तो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकाका विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर हामीले यसअघि पनि यस्तो प्रतियोगिता गराएका छौं’ संस्थाका कृष्णप्रसाद दुवाडीले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीलाई हौसला दिनको लागि यस्ताखाले प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनेछौं ।’
अंग्रेजी र बोर्डिङमा मात्रै, नेपाली र सरकारीमा खै ?
प्रकृतिले लेखेको अक्षर फेसबुकमा सार्वजनिक हुँदा धेरैले उनको तारिफसँगै प्रश्न पनि गरेका छन्–यस्तो प्रतियोगिता निजी स्कूल र त्यसमा पनि अंगे्रजीमा मात्रै किन ? हुन पनि प्रतियोगितामा सहभागी ४ हजारमध्ये प्रायः सबै निजी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थी छन् । आयोजकले प्रतियोगिता पनि अंगे्रजी अक्षर लेखनमा गरेको छ ।
तर अब नेपाली अक्षर लेखनमा पनि यस्तो प्रतियोगिता गर्ने एडुटेक एकेडेमी सोलुसनले जनाएको छ । ‘हामी सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि आकर्षित गर्नेगरी प्रतियोगिता गर्ने सोचमा छौं’ दुवाडीले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्छौं ।’
तपाई हाम्रै अनुहारमा भएको कालो दाग एव डण्डीफोरलाई हटाउन कतै जानु पर्दैन दात माझ्ने कोलगेट वाटै निर्मुल पार्न सकिने
नेपालकै चर्चित शक्ती पिठ माता मनकामना माईको महिमा बारे जानकारी लिनुहोस के छ त यस्तो बिश्चमा फैलिएको महिमा
चर्चित लोक दोहोरी गायक रामजी खाँड र उनकि श्रीमतीले ल्याए “कती सुहाको” तिज गित (…
एसियाकै अग्लो ठाउँमा रहेको कुष्मा बजार जोड्ने झोलुङ्गे पुल बारे फेरी नौलो बिशेषताबारे…
बैज्ञानिकले फेरी चमत्कार गर्दै यस्ता अचम्मैका आबिस्कार गरे हेर्नुहोस भिडियो सहित,पुरा…
नेपालको झण्डा लाई घरको अगाडी राखिदै छ यसरी निर्माणाधिन घरमा, यसरी राष्ट्रियतालाई…